Sida loo arko furahaaga sirta ah ee ku kaydsan iPhone | Wararka IPhone
IPhone-ka ayaa noqday saaxiibka ugu weyn ee maalinteenna maanta Xaaladaha badankood, si aad u tiro yar oo aan isticmaaleyaal yar la kulmin dhibaatooyin markii ay galayaan adeegyada internetka qaarkood marka ay fadhiistaan ​​shaashadda PC-ga hortiisa ama qalab kale.
Si kastaba ha noqotee, dhammaanteenna ku keydinno codsi gaar ah iyo ereyada sirta ah bogagga taleefannadeenna waa la soo dhaweynayaa. Waxaan ku bari doonnaa sida loo arko loona maareeyo dhammaan lambarkaaga sirta ah si toos ah iphone ama iPad marka loo baahdo. Hawl fudud laakiin mid naga badbaadin karta wax ka badan hal munaasabad.
Waxaad ku jirtaa shaashadda PC ama aaladda qof aad is taqaanid oo waxaad dooneysaa inaad gasho codsi ama adeeg gaar ah, umana aadan baran inaad gasho maxaa yeelay waxaad haysataa wax kasta oo otomaatig ah iPhone ama iPad. Waa wax u eg sida dhammaanteen u eg, si kastaba ha noqotee, haysashada iPhone-kaaga gacanta hawshan waxay leedahay xal fudud:
Waxaan tagnaa arjiga goobaha iPhone
Waxaan u soconaa shaqeynta Xisaabaadka iyo lambarka sirta ah
Guji: Furayaasha ereyada iyo boggaga, helitaanka aqoonsikeena taabashada ama furaha furaha
Waxaan u adeegsanaa mashiinka raadinta oo waxaan si toos ah ugu helnaa lambarka sirta ah iyada oo aan loo baahnayn talaabooyin dheeri ah
Way fududahay, sidoo kale, haddii aan riixno badhanka "Wax ka beddel", waxaan awoodi doonnaa inaan wax ka beddelno xuduudaha iyo websaydhka loo qoondeeyey lambarka sirta ah. Intaas waxaa sii dheer, liiska sirta ah, haddii aan midkood bidix ilaa midig u dul-qaadno, waxaan awoodi doonnaa inaan ka tirtirno iCloud oo mar dambe lama keydin doono.
Haddii aynaan hubin waxa aan raadineyno, waxaan isticmaali karnaa mashiinka wax raadinta oo geli karnaa ereyada muhiimka ah ee si dhakhso leh noo siinaya furayaashan sirta ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo arko furahaaga sirta ah ee ku kaydsan iPhone
Aaway furayaashii sirta ahaa? meelna kama wada wada masaxeen sideen ugu soo ceshan karaa?
Ma heli karo si aan u arko eraygayga sirta ah ee cinwaanka e-maylka Traveler ee aan ku haysto iphone 8
Kama muuqato liiska ereyada sirta ah ee degellada iyo barnaamijyada!
Waxaan gujinayaa Account-ka oo kaliya waan arkaa qodobbada laakiin ma arki karo!
Barnaamijka gudbinta ee iOS ayaa ka bixi doona App Store
Apple ayaa wajaheysa 23 dacwadood oo ku saabsan gaabiska iPhones hore